Россия продала первый комбайн в ЮАР — Картофельная Система
Ruushku wuxuu iibiyay kii ugu horreeyay ee isu keenaya Koonfur Afrika
Madaxa dhaqaalaha Afrika Eldorado Guus Oliver ee Koonfur Afrika wuxuu helay isku duwaha shirkada ruushka Rostselmash. Tan waxaa lagu soo sheegay war-saxaafadeed ku saabsan websaydhka warshad.
Dhowr maalmood, Rostselmash waxay ku qabatey mudaaharaadyo qalabka jamhuuriyada afrika. Iyada oo ku saleysan Beeraha Eldorado, awoodaha Torum 780 ee Ruushka ayaa la muujiyay.
Warbixinta ayaa xustay in midhihii soo goostay "ay jawaab celin wanaagsan ka heleen khubaro lagu casuumay," hoggaamiyeyaasha shirkadaha ganacsiga beeraha ee gobollada ayaa sidoo kale bogaadiyay hufnaanta dhaqaale ee goosashada tijaabada.
Bishii Janaayo 2017, madaxa Wasaaradda Wershadaha iyo Ganacsiga, Denis Manturov, wuxuu sheegay in dhoofinta mashiinada beeraha ee Ruushka ay laba jibaari karto labada sano ee soo socota. Dhamaadkii 2016, qiyaastii 12 boqolkiiba mashiinada beeraha ee laga soo aruuriyey Ruushka ayaa la dhoofiyay. Qiyaastii 2,7 kun unug ayaa la geeyay dalka dibadiisa sanadkii hore, taas oo ah 20 boqolkiiba in ka badan intii sanadkii 2015.
Rosselkhoznadzor ayaa ka talaabay Azerbaijan 40 da tan oo baradho cudurka qaba
Tatarstan, dhaxan dartiis, dhulkii la beeray dib ayaa loo hubin doonaa
Tuulada Bryansk Melensk waxay Ruushka siisaa 7% baradhada
Qiyaastii 50 hektar oo dhul ah ayaa loo qorsheeyay in lagu beero baradhada Yamal
Baradhadu duugga ah ayaa kor u kacay qiimaha ilaa bilowgii 2017 boqolkiiba 93,9% Nizhny Novgorod
Shirkadaha beeraha ee dhulka loo yaqaan 'Krasnoyarsk Territory' saddexdii sano ee la soo dhaafay waxay ku kordhiyeen aagga baradhada 40,4%